मानव विकास फलस्वरूप देखा जो सूची को शिक्षा, आर्थिक भूगोल ठाउँ छ। यस्तो भौतिक, गणित, भूगोल रूपमा प्राकृतिक विज्ञान, को मूल, पुरातन समयमा भयो। वास्तविकता को cognition प्रक्रिया अन्ततः अलग विशेष क्षेत्र विभाजित। यो विशेषज्ञता intellectually विकास र प्रकृति मा निरन्तर भएको घटना व्याख्या गर्ने प्रयास गर्ने मान्छे को वृद्धि आवश्यकता कारण थियो। समय संचित ज्ञान संग, विशिष्ट अनुसन्धान क्षेत्रमा आकार लिन थाले।
पचास वर्ष पहिले केही चालीस - एक विज्ञान रूपमा आर्थिक भूगोल आकार त्यसैले लामो पहिले लिए। उनको लागि अध्ययन विषयको देशहरूमा र महादेशमा, उत्पादन सुविधाहरु को नियुक्ति र को गठन मार्फत मान्छे को resettlement प्रक्रिया सेवा राज्य सीमाना। यो परिभाषा देखि देख्न सकिन्छ रूपमा, विज्ञान ध्यान रचनात्मक काममा संलग्न छन् जो जहाँ मान्छे बाँच्न एक क्षेत्र निर्देशित छ। सामाजिक-आर्थिक भूगोल आफ्नो अनुसन्धान मात्र होइन को सर्कल समावेश आर्थिक सम्बन्ध तर पनि आफ्नो सामाजिक अंश। धेरै वैज्ञानिकहरू तिनीहरूले ecumene अध्ययन भन्ने विश्वास गर्छन्।
जो विभिन्न स्रोतबाट पाउन सकिन्छ परिभाषा अनुसार, oecumene - मानिसहरूलाई र ग्रह को सबै भन्दा विकसित भाग द्वारा Inhabited छ। त्यसैले, आर्थिक भूगोल यी क्षेत्रहरूमा सीमानाहरू भित्र ठाउँ लिन भनेर सबै प्रक्रियाहरू अध्ययन गर्छ। यो सूची डेमोग्राफिकहरूको, संस्कृति, राजनीतिक संरचना, समावेश आर्थिक गतिविधि , र अझ थप। यी वस्तुहरु अध्ययन गर्दै छन् र अन्य विज्ञान को शाखा। तर यस सन्दर्भमा उल्लेख पर्छ भनेर मुख्य कुरा हो - वातावरण छ। यस मामला मा वातावरण संग मानव अन्तरक्रिया प्राथमिक चासो छ।
जस्तै रूपमा प्रादेशिक र सामाजिक प्रणाली, रोमन साम्राज्य वा सोभियत संघ, त्यहाँ, केही अवस्थामा छन्, र, केही समय अवधिको लागि अस्तित्व भएको आफ्नो विकास र पतन रोक्न। इतिहासकारहरूले र राजनीतिक वैज्ञानिकहरू यसको अवधारणाहरु को भाग रूपमा यी प्रक्रियाहरू व्याख्या र आर्थिक भूगोल आफ्नो मूल्यांकन लागि यसको आफ्नै अनुसन्धान उपकरण र मापदण्ड छ। अभ्यास देखाउँछ रूपमा, एकल क्षेत्र छैन सामाजिक प्रणाली स्थिर थियो भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्याप्त अवस्था छ। यो स्थिरता आवश्यक कार्यात्मक एकता सुनिश्चित गर्न। त्यसैले, विभिन्न विभाग को औद्योगिक उद्यम विशेष उत्पादन फलस्वरूप देखिन्छ जो विवरण उत्पादन।
अध्ययन वस्तु रूपमा संसारको आर्थिक भूगोल राज्य जाँच्ने। हाल, धेरै ध्यान supranational कम्पनीहरु को गतिविधिहरु भुक्तान छ। तिनीहरूले विभिन्न देशहरूमा इलाका मा काम, र यसरी सामाजिक सम्बन्ध एउटा नयाँ प्रकारको लागि आधार सिर्जना गर्नुहोस्। हामी यो नयाँ घटना छ भनेर भन्न सक्दैन। तथापि, हालैका दशकहरूमा, यो प्रवृत्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था मा मुख्यधारा बन्दैछ। यो अध्ययन र मानव समाज को विकास को नयाँ वैज्ञानिक अवधारणा सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
परिवहन जर्मनी: प्रकार र विकास
कार सीट कोआल Secura प्लस खेल - को सुरक्षा को लागि आफ्नो बच्चाको
एक विशेषज्ञ संग परामर्श: EUROTEST Rostest भिन्न
बिरालो Ocicat: वर्ण, नस्ल मानक, वर्णन र फोटो
सुन्दर, मित्र राम्रो उद्धरण
को महसुल "मेगाफन" कसरी परिवर्तन गर्ने? सजिलो!
कहिलेकाहीं हामी यसलाई हाम्रो प्रतिज्ञा देख्न कि रात? किन लीख s को सपना: सफलता वा निराशा?
गति नियामक संग grinder: निर्माता मा छनौट मा सुझाव र समीक्षा
को रुबल को अवमूल्यन: यो के हो र यसको परिणाम के हुन्?